Home Wararka Gudaha Maxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Aqalka Sare & qaabilsanaha Midowga Yurub arrimaha...
Maxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Aqalka Sare & qaabilsanaha Midowga Yurub arrimaha geeska?
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso u qaabilsanaha Midowga Yurub arrimaha geeska (EUSR) Marwo Annette Wamber oo ay wehlinaysay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Marwo Tiina Intelmann iyo xubno kale.
Kulanka oo ka dhacay xarunta Aqalka Sare kaas oo qaatay saacado badan ayaa waxaa lagu gorfeeyay “sidii Midowga Yurub uu gacan uga siin lahaa Aqalka Sare BFS gudashada waajibaadkiisa Dastuuriga ah ee loo igmaday.” Sida lagu yiri qoraal ka soo baxay Aqalka Sare.
Dhanla kale Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa uga mahadcelshay wafdiga ay hoggaaminayso u qaabilsanaha Midowga Yurub arrimaha geeska (EUSR) Marwo Annette, Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Marwo Tiina Intelmann, sida ay ugu heelan yihiin dowlad dhiska Soomaaliya.
Kulanka uu Guddoomiyaha Aqalka Sare la yeeshay Annette Wamber & wafdigeeda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Senator Maxamed Cali Yuusuf “Gaagaab”, Xoghayaha Aqalka Sare iyo ku xigeenkiisa.
Previous articleMaxaa sababay in natiijo la’aan uu kusoo dhammaado kulanka Muuse Biixi & Axsaabta mucaaradka?
Next articleMadaxweyne Xasan oo Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Yurub kala hadlay soo celinta taageerada Midowga Yurub ee Soomaaliya.
Maxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Golaha Shacabka & Safiirka Sacuudiga u...
Mareykanka Oo Ergey Cusub U Soo Magacaabay Geeska Africa